Semalt संकेतहरू: वेब पृष्ठहरू कसरी स्क्र्याप गर्ने
सम्भावना यो छ कि तपाईंले आफैलाई त्यस्तै अवस्थामा फेला पार्नुभयो जहाँ तपाईंले वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न केही तस्वीरहरू वा फाइलहरूको लागि पर्खनु पर्दछ, र यसले धेरै लामो समय लिइरहेको छ। हामी मध्ये अधिकांश यस्तो ढिलाइबाट चिन्तित हुन्छौं। त्यसोभए तपाईले सोध्नुभयो, के पूरै वेब पृष्ठ डाउनलोड गर्न र यसलाई तत्काल पहुँचको लागि स्थानीय रूपमा सुरक्षित गर्न सम्भव छ? ठीक छ, हो यो Surfoffline वेबसाइट डाउनलोडरको साथ सम्भव छ। अझ राम्रो कुरा के छ भने तपाईंसँग वेबसाइटबाट प्रत्येक टुक्रा सामग्रीमा पूर्ण पहुँच हुनेछ। तसर्थ, तपाईं त्यस्ता फाईलहरू कतै कपी पेस्ट गरेर निर्यात गर्न सक्नुहुनेछ।
यसले के गर्छ?
यस उपकरणले आंशिक रूपमा ब्राउजरको रूपमा काम गर्दछ कि यसले तपाइँलाई आवाश्यक सामग्री प्राप्त गर्न इन्टरनेट जडान मार्फत वेब पहुँच गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरू कुन वेबसाइटहरू डाउनलोड गर्ने छनौट गर्नका लागि स्वतन्त्र छन साथै तिनीहरू प्रत्येकमा कुन प्रकारको सामग्री डाउनलोड गर्ने भन्ने छनौट गर्न स्वतन्त्र छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने प्रोग्रामले एकै साथ १०० फाईलहरू डाउनलोड गर्न सक्दछ। यदि यो पर्याप्त छैन भने, तपाईं project००००० फाईलहरू डाउनलोड गर्नका लागि कार्यक्रम तयार गर्न सक्नुहुनेछ।
समर्थित इन्टरनेट टेक्नोलोजीहरू
असंख्य उपलब्ध वेब-सम्बन्धित टेक्नोलोजी र प्रोग्रामिंग भाषाहरूको कारण, सबै वेब पृष्ठहरू काट्ने एकल विधि प्रयोग गर्न लगभग असम्भव छ। यसले पनि एचटिपीबाट एफटीपी इन्टरनेट प्रोटोकलमा बिभिन्न वेब प्रारूपहरूसँग सम्झौता गर्न सक्षम हुने विभिन्न प्रविधिहरू समेकित गरेर यो हुडल छोड्छ। यसले सुरक्षित प्रोटोकल HTTPS मार्फत वेबसाइटहरू डाउनलोड गर्नका साथै प्रोक्सी सर्भरहरू मार्फत समर्थन जडानहरू पनि अनुमति दिन्छ।
यदि तपाईं एक वेबसाइटमा काम गर्दै हुनुहुन्छ जसलाई HTTP वा FTP प्रमाणीकरण आवश्यक छ, तपाईंले चिन्ता लिनु पर्दैन किनकि कार्यक्रमले यी पनि समर्थन गर्दछ। यो नोट गर्नु महत्वपूर्ण छ कि जाभास्क्रिप्ट, म्याक्रोमिडिया फ्ल्यास साथै CSS र CSS2 पार्सिंग पनि समर्थित छ
किन Surfoffline वेबसाइट डाउनलोडर?
कार्यक्रम एक अंतर्निहित ब्राउजरको साथ आउँदछ; यसले तपाईंलाई साइटमा पूर्वावलोकन गर्न अनुमति दिनेछ जुन तपाईं काम गर्न चाहानुहुन्छ र द्रुत रूपमा तपाईले डाउनलोड गर्न चाहानुभएको विभिन्न प्रकारका फाईलहरू पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं सम्पूर्ण साइट डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्न भने।
वेबसाइट रिपर क्षमताले तपाईंलाई तपाईंको आवश्यकता अनुसार सामग्री फिल्टर गर्न अनुमति दिनेछ साथ साथै लिंक गरिएको साइटहरूबाट डाउनलोड गर्ने कि नगर्ने पनि निर्दिष्ट गर्दछ।
अन्तर्निर्मित वेब सर्भरले तपाईंलाई डाउनलोड गरिएका फाइलहरू र वेब पृष्ठहरू अन्य कम्प्युटरहरूसँग साझेदारी गर्न र टाढा टाढा काम गर्ने अनुमति दिनेछ किनकि तपाईं सजिलै अर्को कम्प्युटरबाट डाटा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ।
असंगठित सामग्रीको अन्त्य गर्न मात्र वेब पृष्ठ अनलाइन डाउनलोड गर्नु एक बेकारको काम हुनेछ। यसैकारण Surfoffline वेबसाइट डाउनलोडरमा फाईलहरू निर्यात विजार्ड समावेश गर्दछ। यसले तपाईंलाई सहि स्थान निर्दिष्ट गर्न अनुमति दिनेछ जहाँ डाउनलोड गरिएका फाइलहरू स्थानीय रूपमा बचत गरिनेछ। उपकरण एक कदम अगाडि जान्छ र हटाउन योग्य मिडियामा लेख्नको लागि डेटा तैयार गर्दछ।
यदि तपाईं सीएचएम फाईलहरू (माइक्रोसफ्ट विन्डोज मद्दत ढाँचा) सिर्जना गर्न रूचि राख्नुहुन्छ भने, उपकरण स्वचालित रूपमा उनीहरूको डाउनलोड डाटाका साथ सम्पूर्ण साइटहरू एकल सीएचएम फाइलमा निर्यात गर्दछ जुन सजिलैसँग वितरित हुन्छ। यो पनि गर्न सकिन्छ यदि तपाईंलाई MHT फाईलहरू चाहिन्छ जुन साना वेब पृष्ठहरूको लागि अधिक सुविधाजनक हो।